गाईडहरू - ट्राभल समाचार | यात्रा समाचार (पृष्ठ २)
हंगेरी, बुडापेस्ट बाट दिन यात्रा
क्यापिटलहरू सँधै पर्यटकहरूका लागि चुम्बक हुन्, तर यदि तपाइँ देशलाई बढी जान्न चाहानुहुन्छ भने, दूर जानु उत्तम हुन्छ ...
लगो डि कोमोको भ्रमण गर्नुहोस्
यदि इटालीमा सुन्दर ताल दृश्य छ भने त्यो लगो डि कोमो हो। यहाँ केहि ...
माचू पिचूको लागि यात्रा
संसारको सब भन्दा जादुई ठाउँहरू मध्ये एक, जहाँ हामी र वातावरण बीचको सम्बन्ध सरल लागी स्पष्ट छ ...
राम्रो र यसको आकर्षण
हामी धेरै गाह्रो समयमा पार गर्दै छौं तर चिसोले हामीलाई छोड्दैछ, न्यानो दिनहरू आउँदैछ र ...
इटाली को शहरहरु
इटालीका सबै शहरहरूमा स्मारकहरू छन् जुन तपाईंलाई प्रभावित पार्दछ। तर ती मध्ये रोम, भ्याटिकन सिटी, मिलान, भेनिस र फ्लोरेन्स बाहिर छन्।
जापान को परम्पराहरु
जापानका धेरै परम्पराहरू छन्, तर वर्षको समयका अनुसार मलाई यो हुन्छ कि यो राम्रो समय हो ...
माउन्ट ओलम्पसको भ्रमण गर्नुहोस्
विश्वको सबैभन्दा प्रसिद्ध हिमालहरू मध्ये एक माउन्ट ओलम्पस हो, ग्रीसको सबैभन्दा लोकप्रिय पर्वत र ...
पाँच गन्तव्यहरू एक्लै यात्रा गर्न
के तिमी एक्लै यात्रा गरिरहेको जस्तो लाग्छ? हामी तपाईंलाई पाँच शहरहरू देखाउँदछौं जुन एक शानदार गन्तव्य हो रमाईलो गर्न को लागी तपाईंको साथमा छैन भने पनि।
मोगराज, सलामन्कामा गन्तव्य
आज हामी स्पेनमा बस्छौं यसको धेरै सुन्दर शहरहरू मध्ये एक: मोगराज। यो सानो छ, यो लुकाइएको जस्तो छ ...
ताहिती फ्रान्सेली टापु हो जुन स्वर्गको पर्यायवाची छ। यो टाढा, विदेशी, विपुल, धनी र महँगो हो, तर पक्कै ...
कर्नवाल, इ England्ल्यान्डको खजाना
इ England्ल्यान्ड अविश्वसनीय, सुन्दर, पोस्टकार्ड परिदृश्यको मालिक हो, तपाईं यसको गाउँको ग्रीनलाई साच्चै विश्वास गर्न सक्नुहुन्न, ...
Cabo de Palos हेर्नुहोस्
एक केप जमिनको एक पोइन्ट हो जुन समुद्रको तर्फ प्रोजेक्ट गर्दछ र यसले ज्वारभाटा र ... लाई प्रभाव पार्दछ।
Garachico, त्रासदी र पर्यटन
टेनेरिफ क्यानरी टापु मध्ये एक हो, तिनीहरू मध्ये सब भन्दा ठूलो र सबैभन्दा जनसंख्या हो। यहाँ, को बारे मा ...
क्रबी, थाइल्याण्डमा अचम्म
थाईल्याण्डमा धेरै सुन्दर प्राकृतिक दृश्यहरू छन्। जब यो प्रकृतिमा आउँदछ, थाईल्यान्ड निस्सन्देह दक्षिणपूर्वमा स्वर्ग हो ...
Carranza घाटी, प्रकृति र संस्कृति
स्पेन भ्रमण गर्नका लागि धेरै रोचक देश हो। प्रत्येक कुनामा यसको आफ्नै तर आज अर्कोको ...
भ्लालाडोलिडको महलहरूको माध्यमबाट
स्पेन महलहरूमा विपुल छ, यो मध्य युग वा मध्यकालीन काल्पनिक सबै प्रशंसकहरूको लागि स्वर्ग हो।
बकिंघम प्यालेस, लन्डनमा शाही भ्रमण
लन्डनमा धेरै आकर्षणहरू छन् किनकि यो एक ऐतिहासिक र एकदम विश्वव्यापी शहर हो, तर कुनै श without्का बिना यदि तपाईंको हो भने ...
Auschwitz, ईतिहासको त्रास
दोस्रो विश्वयुद्धले हामीलाई छोडेको पाठहरूमध्येको एउटा कस्तो भयावह ...
ओर्बानेजा डेल कास्टिलोको माध्यमबाट हिँड्नुहोस्
ग्रामीण getaways फेसन मा छन् र शहर बाट निस्कन एक राम्रो तरिका हो, आराम, ...
वर्साइलहरूको दरबारको भ्रमण गर्नुहोस्
के तपाईं यस वसन्तमा फ्रान्स भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ र भेरिसेल्सको भव्य दरबार हेर्न चाहनुहुन्छ? तपाईंले यसको पछुताउनु पर्दैन, ...
केन्द्रीय पार्क को माध्यम बाट पैदल
न्यु योर्कको सब भन्दा प्रतीकात्मक ठाउँ मध्ये एक सेन्ट्रल पार्क हो, केन्द्र पार्क जुन फिल्म र टेलिभिजनका लागि धन्यवाद विश्वव्यापी रूपमा परिचित छ। र तपाईं न्यु योर्क किन जाँदै हुनुहुन्छ? शानदार केन्द्रीय पार्क को माध्यम बाट पैदल यात्रा हराइरहेको बारेमा सोच्नुहोस्!
कालो वन मा पर्यटन
नाम «ब्ल्याक फरेस्ट delicious या त एक स्वादिष्ट मिठाई वा यूरोपको एकदम सुन्दर क्षेत्रलाई जनाउँछ।
जहरा डे ला सिएरा, Cádiz मा गन्तव्य
स्पेनसँग धेरै दिनहरूको छुट्टीको साथ धेरै अविश्वसनीय गन्तव्यहरू र उत्कृष्ट यात्राहरू छन्। यी भ्रमणहरू मध्ये एक हो ...
लन्डन नेत्र, एक लण्डनमा पर्छ
धेरै शहरहरूमा उत्कृष्ट आकर्षण, चिन्तन, डिजाइन र पर्यटक दृश्यको साथ बनाईएको छ। उदाहरण लन्डन हो ...
माउन्ट फुजीको भ्रमण गर्नुहोस्
जापानको प्रतीक माउन्ट फुजी हो। मंगा, एनिमे वा जापानी सिनेमा को कुनै फ्यान यो थाहा छ ...
युरोपको उच्च पहाड
मलाई लाग्छ कि सबैलाई थाहा छ संसारको सब भन्दा अग्लो पहाड सगरमाथा हो ... तर के तपाईंलाई थाहा छ यो के हो ...
बुडापेस्टको थर्मल स्नान
बुडापेस्ट हंगेरीको राजधानी हो, धेरै पुरानो शहर र लामो समयदेखि यसको लागि प्रसिद्ध शहर ...
नुरियाको उपत्यकामा यात्रा
स्पेनमा अविश्वसनीय गन्तव्यहरू छन् र यदि तपाइँ प्रकृति र बाहिरी पर्यटन मनपराउनुहुन्छ भने तपाईं क्याटालोनियाको गेरोना प्रान्त जान सक्नुहुन्छ, जाडो आउँदैछ त्यसैले तपाईं स्की यात्राको योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। के तपाईंलाई नुरियाको उपत्यका र यसको स्टेशन थाहा छ? यो राम्रो, सुन्दर र परिचित छ।
मध्य पूर्व राजधानीहरू
मध्य पूर्वी। विश्वको यो क्षेत्र केवल पचास बर्ष भन्दा कम उमेरका लागि प्रायः बारम्बार समाचारहरूमा रहन्छ। आंशिक रूपमा किनकि यो मध्य पूर्व क्षेत्र हो, यससँग धेरै पुराना शहरहरू छन् र इतिहास र संस्कृतिले धनी छ। तिनीहरू सँधै सुरक्षित हुँदैनन् तर यदि तपाईंलाई रूचि मनपर्दछ ...
स्पेनमा सब भन्दा सुन्दर महल
कस्तो चयन! सत्य यो हो कि स्पेनमा सबैभन्दा सुन्दर महलहरूको सूची बनाउन एकदम गाह्रो छ ... त्यहाँ धेरै छन्! र कुन मापदण्डले स्पेनमा धेरै सुन्दर महलहरू हुन सक्छ, के यो सूची बनाउन सम्भव छ? हामीले प्रयास गरेका छौं कि यदि तपाईंलाई उही समान मन पर्छ भने हेर्नुहोस्।
मानिस जहिले पनि माथितिर निर्माण गर्न मनपराउँदछ र संसार निर्माणले भरिएको छ कि आकाशलाई खार्न वा बादलसम्म पुग्न प्रयास गर्दछ। यदि तपाईं इटालीको यात्रामा जानुहुन्छ भने, टावर अफ पिसालाई नबिर्सनुहोस्। साई, प्रसिद्ध झुकाव टावर। यो फ्लोरेन्सको निकट नजिक छ।
यदि तपाईंलाई वास्तुकला मनपर्दछ भने त्यहाँ धेरै भवनहरू र संरचनाहरू छन् जुन व्यक्तिमा चिनिन योग्य छ। पोर्तुगलमा उदाहरणका लागि धेरै भवनहरू छन्। के तपाईं लिस्बनको यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ? त्यसोभए सुन्दर Torre de Belém भ्रमण गर्न नबिर्सनुहोस्। यो बाहिर र भित्र सुन्दर छ र यसको छतबाट हेराईहरू सबैभन्दा बढी हुन्छ।
युरोप चर्चहरू र मठहरूले भरिएको छ र सबैभन्दा राम्रा केहि स्पेनमा छन्। यो गुआडालुपको मठको मामला हो, स्पेनको एउटा विश्व सम्पदा एक्स्ट्रेमादुरामा छ र यो गुवाडालुपको सुन्दर मठ हो। यो नछुटाउ!
इक्वेडर सीमा शुल्क
ल्याटिन अमेरिका दौडहरूको पग्लने भाँडो हो र यसको हजारौं वर्षको सभ्यता र संस्कृतिहरूले महत्त्वपूर्ण विरासत छोडेका छन्। हुनसक्छ, एक गैर अमेरिकी को लागी, तपाई इक्वेडर जानु छैन? ठिक छ, यो एक सुन्दर देश हो र यसको धेरै चलनहरू छन्। भ्रमण गर्नु अघि उनीहरू मध्येका केहिलाई थाहा छ? शिष्टाचार, विशिष्ट पोशाक, खाना ...
यदि तपाइँ दक्षिण अमेरिकालाई चिन्नुहुन्न भने सम्भवतः तपाईलाई थाहा छैन कि बोलिभिया बहुउद्देश्यीय देश हो र त्यसैले यो भन्न सम्भव छैन कि यसको परम्परा र तपाई बोलिभिया जानुहुन्छ? कस्तो सुन्दर गन्तव्य! यससँग धेरै सांस्कृतिक रीतिथितिहरू छन्, धेरै इतिहास र स्वादिष्ट भोजनहरू छन्! केहि चीजको लागि निश्चित गर्नुहोस्।
सिंहासन नक्शा को खेल
मध्ययुगीन कल्पना ठूलो विधा हो जुन जादू र राजनैतिक षडयन्त्रदेखि रोमान्स मार्फत वीरतामा र तपाईलाई गेम अफ थ्रोन्स मनपर्दछ? ठीक छ, आयरल्यान्ड र स्पेनमा तपाईंसँग धेरै प्राकृतिक सेटिंग्स छन् जहाँ श्रृंखलाको धेरै एपिसोडहरू फिल्माइएको छ।
ज्याक द रिपर र शेरलक होम्सको साथ लन्डन
ज्याक रिप्पर र शेरलॉक होम्समा हिंडेर लन्डन पत्ता लगाउनुहोस्। मृत्यु, पीडित, हत्यारा, शत्रु, षडयन्त्रको सब भन्दा अ the्ग्रेजी राजधानी को पुरानो गल्ली को माध्यम बाट।
फिजीमा छुट्टि, स्वर्गमा छुट्टीहरू
के तपाई समुद्र तट, कोरल र प्रकृति मन पराउनुहुन्छ? त्यसोभए फिजीको लागि टिकट किन्नुहोस् र ओसिनियामा यी उत्कृष्ट र आरामदायक टापुहरूको आनन्द लिनुहोस्।
टोकियो मा5धेरै विचित्र रेस्टुरेन्ट
टोकियोमा खाना सधैं एक पार्टी हो तर यी places स्थानहरूमा यो विश्वको सबैभन्दा विचित्र चीज हो: पिशाच, साइकेडेलिक सपना, निन्जास ...
वाइल्ड एट्लान्टिक वे, आयरल्याण्डको तटीय सडक
आयरल्यान्डमा कार भाँडामा लिनुहोस् र यसको अटलान्टिक तटमा सेट सुरु गर्नुहोस्: सुन्दर वाइल्ड अटलान्टिक तटमा २,2500०० किलोमिटर! समुद्र तट, चट्टानहरू, महलहरू, गाउँहरू।
कनाजावा, मध्ययुगीन जापानको आकर्षणको साथ
जापानलाई हो वा हो भनेर जान्न तपाई सबै जापानी मध्ययुगीन आकर्षणको साथ कानाजावा जानुपर्नेछ। महल, मन्दिर, निन्जास, समुराई
दोहामा राती जीवन, पुरुष र महिलाहरूको लागि
कतारको राजधानी दोहाको धेरै रातको जीवन छ त्यसैले यदि तपाईं यात्रामा जानुहुन्छ भने बारमा जान र नाच्न सुरुचिपूर्ण लुगा लगाउन हिचकिचाउँनुहुन्न।
बेइजि inमा ird अनौंठो गतिविधिहरू
केहि समयको लागि, बेइजि एशियामा ठूलो गन्तव्यहरू मध्ये एक भएको छ ...
न्यूयोर्कमा घोस्टबस्टर यात्रा
यदि तपाईं न्यू योर्क जानुहुन्छ र तपाईंलाई फिल्महरू मनपर्दछ भने त्यहाँ जानको लागि अझ धेरै कुरा छ, तर यदि तपाईं घोस्टबस्टरहरूको प्रशंसक हुनुहुन्छ भने तपाईं तिनीहरूको स्थानहरू देख्न सक्नुहुनेछ। घोस्टबस्टरहरूको यात्रा लिनुहोस्!
न्यू क्यालेडोनिया, संसारको एक सानो कुना
के तपाइँ गर्मी टाढा प्याराडाइजमा खर्च गर्न चाहानुहुन्छ? तब नयाँ क्यालेन्डोनिया, एक हजार परिदृश्य संग एक शानदार टापु प्रयास गर्नुहोस्: समुद्री तट, मैंग्रोभ्स, क्लिफ्स, वन
स्टकहोममा अनौंठो दर्शनीय भ्रमणहरू
सबै शहरहरूले अनौंठो ठाउँहरू राख्छन् यदि तपाईं सबै पर्यटकहरू जस्तै गर्न चाहनुहुन्न भने, यी अनौठो भ्रमणहरू स्टॉकहोममा लेख्नुहोस्।
एयरबस ए 380०, सबै भन्दा ठूलो
के तपाईंलाई थाहा छ संसारमा सबैभन्दा ठूलो वाणिज्यिक हवाईजहाज कुन हो? यो एयरबस ए 380० हो, बार र स्नानको साथ डबल डेकर विमान। यसलाई जान्नुहोस्!
भानुआटु, टाढा स्वर्ग
ताहिती वा बोरा बोरा भन्दा कम परिचित तर दक्षिण प्रशान्तमा भानुआटु जस्तो सुन्दर छ। यी टापुहरूले समुद्र तट, ज्वालामुखी, जles्गल र नरभक्षीहरू पनि दिन्छ।
क्योटोको वरपरको ठाउँ अद्भुत छ त्यसैले उनीहरूको भ्रमण गर्न निश्चित हुनुहोस्: अरशिअमामा, कोकेडेरा, Katsura र हजारौं रातो तोरिस Fushimi Inari।
कहाँ एक वास्तविक बिरालो जस्तै म्याड्रिड मा भर्मउथ पिउन?
जो कोही जो म्याड्रिडमा केहि समयको लागि बसोबास गर्‍यो भने कि ...
जमैकामा एक हप्ता आनन्द लिनुहोस्
जमैका समुद्री तट र रेगको पर्यायवाची हो तर यति धेरै प्रस्ताव गर्दछ। जमैकामा एक हप्ता सबै भन्दा राम्रो हो: समुद्र तटहरू, झरनाहरू, जंगल, पहाडहरू र रमको धेरै।
बार्बाडोसमा सन्नी छुट्टी
के तपाई क्यारिबियनको बारेमा सोच्नुहुन्छ? ठिक छ, बार्बाडोस एक महान गन्तव्य हो: सुन्दर समुद्र तट, काल्पनिक समुद्र, औपनिवेशिक इतिहास र अधिक, धेरै रम।
भियतनाममा क्यू ची टनेलहरू भ्रमण गर्नुहोस्
भियतनाममा तपाईंले कु ची टनेलहरू बिर्सनुहुन्न: भूमिगत, सानो, साँघुरो र भियतनाम युद्धको महान विरासत।
जिब्राल्टरको रक भ्रमण गर्नुहोस्
के तपाईं जिब्राल्टरमा भाग्न चाहानुहुन्छ? केही दिनको साथ यो माथि र चट्टान तल जान, खान, हिड्न र रमाइलो गर्न पर्याप्त छ।
हवाइजहाजमा हात सामानको लागि द्रुत गाईड
कुनै पनि यात्रीको लागि ठूलो चिन्ता भनेको एयरलाइन्स द्वारा निर्धारित लग्ज सीमा भन्दा बढी हो। जब यो आउँछ ...
दुबईमा रातको जीवन, रमाइलो गर्ने तरिका
के तपाई दुबई जानुहुन्छ? ठीक छ, यो मरुभूमि र किनमेल भन्दा धेरै हो, यो एक शानदार रात्रि जीवन छ! बाहिर जानको लागि लुगा प्याक गर्नुहोस् किनभने तपाईंसँग एक ठूलो समय छ।
टोकियो मा गर्मी मा के खानुहुन्छ
यदि तपाइँ ग्रीष्म Tokतुमा टोकियो जानुहुन्छ भने जापानको राजधानीमा सबै भन्दा राम्रो ग्रीष्म disतुहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। उनीहरू कत्ति स्वादिष्ट छन् भन्ने देखेर तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ!
चीन कसरी पुग्ने? उडान, रेल र अन्य साधनहरू
यदि तपाईंलाई चीन कसरी पुग्ने थाहा छैन भने, यो गाइड अनुसरण गर्नुहोस् जहाँ हामी तपाईंलाई चिब्ना पुग्ने उत्तम तरिकाहरू: विमान, रेल, सडक ...
तपाइँ गर्मी मा पेरिस जाँदै हुनुहुन्छ? चिन्ता नलिनुहोस्, त्यहाँ धेरै पुलहरू शान्त छन् त्यसैले केही नाम उत्तम राख्नुहोस्।
हवानामा days दिन के गर्ने
के तपाई क्युबा जानुहुन्छ? यसको समुद्री तटमा सिधा नछाड्नुहोस्। हवानामा days दिन खर्च गर्नुहोस् र यसको इतिहास, संस्कृति र सम्पदा पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईं आश्चर्यचकित गर्न रोक्नुहुनेछ!
पेरिसको best उत्तम दृश्यहरू
जब तपाईं पेरिस जानुहुन्छ, यसका सडकहरूमा हिंड्न र यसको अग्लो भवनहरू चढ्न बन्द नगर्नुहोस्। पेरिसको best सर्वश्रेष्ठ पानोरमिक बिन्दुहरूबारे जान्नुहोस्!
लोनली प्लेनेटका अनुसार विश्वमा १० सर्वश्रेष्ठ स्थानहरू
एक्लो प्लानेट गाइडका अनुसार यात्रा गर्न को लागी संसारका सब भन्दा राम्रा ठाउँहरू पत्ता लगाउनुहोस्। कम्तिमा एक पटक भ्रमण गर्नुपर्नेछ आश्चर्यजनक ठाउँहरू।
जापान मा कामकुरा को महान बुडा भेट्नुहोस्
के तपाई टोकियोमा हुनुहुन्छ? ट्रेन लिनुहोस् र कामकुराको महान् बुद्ध हेर्न आउनुहोस्, जुन एक प्राचीन र अद्भुत शहरमा विशाल मूर्ति हो।
अकल्याण्डमा tourist पर्यटक गतिविधिहरू
अकल्याण्ड न्यूजील्याण्ड मा एक महान गन्तव्य हो। एक सुन्दर शहर, यदि कुनै छ भने, हामीलाई धेरै बाहिरी गतिविधिहरू प्रदान गर्दछ। तिनीहरूलाई खोज्नुहोस्!
बोलभिया, दक्षिण अमेरिका को लुकेको मोती
बोलिभियाले तपाईंको लागि के छ पत्ता लगाउनुहोस्: पुरानो भग्नावशेष, औपनिवेशिक शहरहरू, शानदार नुन फ्लैटहरू, महान व्यक्तिहरू। धेरै आश्चर्यहरु!
पेरुको तटमा हुआन्चाकोमा छुट्टिहरु
यदि तपाइँ सर्फिंग, पेरू र पुरातन संस्कृति मनपराउनु हुन्छ भने Huanchaco गन्तव्य हो तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्न। यो एक दुनिया भरका मानिसहरू संग स्पा हो।
बर्निंग म्यान, कला र रहस्यवादको बीचको उत्सव
कला, इलेक्ट्रोनिक संगीत, नयाँ युग, पागल म्याक्स, हार्स रेसि that, यी सबै संयुक्त राज्य अमेरिकामा बर्नि festival म्यान उत्सव हो। के तपाईं उसलाई चिन्नुहुन्छ?
सुरिनामको लागि एक साहसी भ्रमण
तपाईलाई रोमांच मन पर्छ? त्यसोभए तपाईं सूरिनामा जान्न सक्नुहुन्छ, सानो जैव विविधताका साथ सानो देश।
जॉर्डनको खजाना पेट्रा कसरी जाने
पेट्रा भ्रमण गर्दा समय र संगठन लिन्छ किनकि त्यहाँ हेर्ने धेरै छ। त्यसकारण, उसले जोर्डनको यो खजाना थाहा पाउन उत्तम व्यावहारिक जानकारी औंल्याउँछ।
मस्को भ्रमण गर्नका लागि गाईड
२०१ 2017 मा रूसी क्रान्तिको सयौं वार्षिकोत्सव मनाईन्छ र तपाईं यात्राको तालिका बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण, यस मद्दतलाई मा लेख्नुहोस् जुन तपाईं मस्कोमा मिस गर्न सक्नुहुन्न
रिक्जाभिक, आइसल्याण्डमा सस्तो पर्यटन
के तपाईंलाई लाग्छ कि आइसल्याण्ड महँगो गन्तव्य हो? तपाईं जहिले पनि बचत गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले म तपाईंलाई यसको सस्तो रिक्जाभेकमा सस्तो यात्राको सुझाव दिन्छु।
क्यानबेरा, अष्ट्रेलियाको राजधानी
अष्ट्रेलिया यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ? सिडनी मेलबोर्नसँग मात्र बस्नुहुन्न, क्यानबेरालाई प्रयास गर्नुहोस्! सबै पछि यो राजधानी हो।
चार सिफारिस टुर्स स्टकहोम मा गर्न
जब तपाईं स्टकहोम जानुहुन्छ यी चारवटा अचम्मका शहर भ्रमणहरू अवश्य गर्नुहोला: भूतहरू, प्रख्यात पुस्तकहरू, अग्लो छत र डु .्गा यात्राहरू छन्।
सेन्ट लुसिया, गर्मी सबै वर्ष
के तपाइँ एक ठाउँ चाहानुहुन्छ जहाँ गर्मी लगभग सबै वर्ष भर छ? त्यसो भए क्यारिबियनतर्फ लाग्नुहोस् र सान्ता लुसियाको सुन्दर टापुको आनन्द लिनुहोस्। तपाईं पछुताउनु हुँदैन!
बैरनक्विला, कोलम्बियामा सर्वश्रेष्ठ कार्निवल शहर
कोलम्बिया को माध्यम बाट एक यात्रा मा, लैटिन अमेरिका मा सबै भन्दा राम्रो कार्निवल को शहर बारानक्विला को लागी नबिर्सनुहोस्।
दुबईमा चार दिन, लक्जरी र एक्सोजिटिज्म
दुबईमा चार दिनको मजा लिन यो गाईड लेख्नुहोस्। तिनीहरू अविस्मरणीय हुनेछन्!
माल्टा भ्रमण गर्दा के गर्ने
के तपाईं माल्टा जाँदै हुनुहुन्छ? तिनीहरू ल्याण्डस्केप, इतिहास, पुरातन मन्दिर र स्वादिष्ट पेट्रोनोमीका तीन टापुहरू हुन्। यो नछुटाउ!
तीन दिनमा भियनाको मजा लिनुहोस्
के तपाईसँग तीन दिन भियना छ? यस शाही शहरमा तपाईले गर्न सक्ने र आनन्द लिन सक्ने सबै चीज लेख्नुहोस्।
Under अन्डरवाटर ज्वेल्सहरू संसारभरि फैलिए
समुद्री गहिराइले ती मानिसहरूलाई गहिरो पानीमा डुबाउने आँट गर्ने मानिसहरूलाई गहिरो गहना राख्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाको पूर्वी तटको भ्रमण, भाग दुई
उत्तरी अमेरिकी पूर्वी तट, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाको सबैभन्दा ऐतिहासिक र सुन्दर शहरहरूको एक ठूलो भ्रमणको आनन्द लिनुहोस्।
संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाको पूर्वी तटको भ्रमण, भाग १
उत्तर अमेरिकी पूर्वी तटमा क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा बढी पर्यटक शहरहरू छन्। सबै भन्दा राम्रो चीज एक अविस्मरणीय यात्रामा सबैलाई एकजुट गर्नु हो, के तपाईं हिम्मत गर्नुहुन्छ?
स्पेन, एक चलचित्र सेट
टेलिभिजन श्रृंखला, हालसालै यति फैशनेबल, र सिनेमा सबै भन्दा राम्रो विज्ञापन भएको छ ...
सेबू, फिलिपिन्समा अन्य पर्यटन विकल्प
फिलिपिन्समा बुराके एक्लै गन्तव्य होईन, डाइभिंग र स्नोरकेलिंगका लागि त्यहाँ सेबु र यसका टापुहरू जस्तो अरु कुनै ठाउँ छैन।
ओकिनावा, ट्रपिकल जापानको यात्रा
ओकिनावा, उष्णकटिबंधीय जापानमा केहि दिनहरू बिताउन तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा।
गर्मी मा पेरिस, के गर्ने
ग्रीष्मकाल सकिएको छैन, त्यसैले पेरिसमा ग्रीष्म enjoyतुमा आनन्द लिनका लागि यी सुझावहरू लेख्नुहोस्: संगीत, थियटर, बीच, सिनेमा।
स्कटिश क्यासल मार्ग अनुसरण गर्नुहोस्
स्कटल्याण्ड यसको महलको लागि प्रसिद्ध छ र तपाईं सबैभन्दा राम्रो, सब भन्दा सुन्दर, अविस्मरणीय हेर्न स्कटिश क्यासल मार्ग अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ।
पोर्तुगालमा सिफारिस गरिएका गन्तव्यहरू
पोर्तुगाल को माध्यम बाट यात्रा पूरा छैन यदि तपाईं यी शहरहरू भ्रमण गर्नुहुन्न। इतिहास, ल्याण्डस्केप, संस्कृति र ग्यास्ट्रोनोमी जोड्नुहोस् र यो अविस्मरणीय हुनेछ!
ओडइबाको भ्रमण, टोकियोको नयाँ चीज
के तपाईं टोकियोमा हुनुहुन्छ र ओडैबा भ्रमण गर्ने कि नगर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ? संकोच नगर्नुहोस्! टापु, यात्रा, सबै, दर्शनीय छ।
नाइसबाट उत्तम भ्रमण
यदि तपाईं यस गर्मीमा राम्रो भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, चारैतिरका आकर्षक फ्रान्सेली रिभिएरा शहरहरूको भ्रमण गर्न निश्चित गर्नुहोस्। तिनीहरू पुरानो र सुन्दर छन्!
स्पेनमा सस्तो समुद्री तट स्थलहरू
स्पेनमा सस्तो समुद्र तट गन्तव्यहरू पत्ता लगाउन सजिलो छ। हामी तपाइँलाई स्पेनीको तटमा पाँच ठूलो गन्तव्यहरूको बारेमा बताउँछौं।
गर्मी मा न्यूयोर्क का आनंद को लागी गाईड
यदि तपाइँ ग्रीष्म Newतुमा न्यू योर्क जानुहुन्छ भने त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् बाहिर र बाहिर हेर्नुहोस्: पार्क, समुद्र तट, हिंड्ने, समुद्री यात्रा, कन्सर्ट र भोजहरू।
टोक्यो मेरो गाईड, के सम्झना छैन
के तपाईं टोक्यो मा याद गर्न सक्नुहुन्न के गर्न गाईड, एशिया को सबै भन्दा राम्रो शहर!
Get उत्तम यात्रा अनुप्रयोगहरू तपाईंको getaways योजना गर्न
यात्रा गर्नु सधैं रमाइलो हुन्छ। नयाँ परिदृश्य, संस्कृतिहरू, ग्यास्ट्रोनोमीहरूबारे जान्नुहोस् ... तर जहाँ त्यो योजना बनाउने कि कहाँबाट सुरु गर्ने ...
क्योटोमा मेरो छुट्टी, प्राचीन शहरको आनन्द उठाउनका लागि मार्गनिर्देशन
तपाईं जापान जान सक्नुहुन्न र क्योटो भ्रमण गर्न सक्नुहुन्न: यो पुरानो हो, रमाईलो छ, यो सुन्दर छ र यो तपाईंमा निर्भर हुन कहिल्यै छोड्दैन।
संसारको7प्राकृतिक चमत्कार
विश्वको natural प्राकृतिक अद्भुत चीजहरूबारे जान्नुहोस्, लोकप्रिय भोटले छनौट गरेको छ, अविश्वसनीय स्थानहरूसँग जुन अवलोकन गर्नै पर्दछ।
ओसाकामा मेरो तीन दिन, त्यहाँ कसरी पुग्ने र के यात्रा गर्ने बारे मार्गदर्शन गर्नुहोस्
ओसाका बोरिंग छैन। योसँग महल, नहरहरू, पसलहरू र एक रात्रि जीवन हुन्छ!
हिरोशिमा गाइड, आणविक बमको शहर मा मेरो तीन दिन
हिरोशिमा आणविक बमको शहर हो र यदि तपाईंसँग तीन दिन छ भने तपाईंले यसलाई याद गर्न सक्नुहुन्न। यो अविस्मरणीय छ!
स्वीडन र फिनल्याण्डको बीचको अलान्ड टापुहरूमा गर्मी
के तपाइँ फरक गर्मी चाहानुहुन्छ? अलान्ड टापु, फिनिश फाईलैंडहरूमा यात्रा गर्नुहोस् जहाँ स्विडेनी भाषा बोलिन्छ।
पोर्चुगिज वे कमिनो डि स्यान्टियागो फ्रान्सेलीपश्चात सबैभन्दा बढी गरिएको दोस्रो हो, र गिलिसियाको दक्षिणमा तुईको एक भाग हो।
हवाईको द्वीपसमूह मा के हेर्ने
जब हामी हवाईको बारेमा सोच्दछौं पहिलो चीज जुन दिमागमा आउँदछ सुन्दर सेतो बालुवा समुद्र तटहरू र ...
ग्रीष्म २०१ 2016, नर्वेमा के गर्ने
के तपाई नर्वे सुन्दर तर महँगो गन्तव्य हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ? नरोक्नुहोस्, लागत र आकर्षणमा र यसमा रमाईलो गर्न यस जानकारी लेख्नुहोस्।
एला, श्रीलंकाको सर्वश्रेष्ठ (भाग I)
उनी Badulla (Uva को प्रान्त) जिल्ला मा अवस्थित र समुद्र सतहबाट १० meters० मिटर उचाईमा छ। कोलम्बो र क्यांडी (देशका मुख्य शहरहरू) को साथ जडित
सेशेल्स, प्रमोदवनमा सबै भन्दा राम्रो बिदाका लागि कुन टापु छनौट गर्नुहोस्
सेसलिन टापुहरू - प्रस्लिन, माहे र ला डिगु पृथ्वीमा स्वर्गको तीन सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्यहरू हुन्।
भ्यालेन्सियाको फ्लास भ्रमण गर्नका लागि गाईड: केहि सुझावहरू
यदि धेरै चाँडै हामी पवित्र हप्ताको मजा लिन गइरहेका छौं, चाँडै हामी भ्यालेन्सियाको फ्लास्, मजा लिन सक्षम हुनेछौं ...
लोनली प्लेनेट (II) अनुसार २०१ 10 को १० सर्वश्रेष्ठ गन्तव्यहरू
यदि अर्को दिन हामीले लोनली प्लेनेटका अनुसार २०१ 2016 को शीर्ष पाँच गन्तव्यहरू तपाईलाई बतायौं भने, अब तपाईको पालो ...
लोनली प्लेनेट (I) अनुसार २०१ 10 को १० सर्वश्रेष्ठ गन्तव्यहरू
पक्कै पनि तपाईं सबैलाई Lonely ग्रह थाहा छ, संसारमा सबै भन्दा राम्रो यात्रा गाइड प्रकाशकहरु मध्ये एक, गाइडहरूको साथ यति नै ...
गालिसियामा कार्निवल अनुभव गर्नका लागि गाईड
हो, हामी पहिले नै जान्दछौं कि यदि हामी कार्निवलको बारेमा कुरा गर्छौं भने हामी सामान्यतया ती मानिसहरू रियो दि जेनेरियोको बारेमा सोच्दछौं, र कम ...
संसारमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण उपत्यका के हुन्?
के तपाईंलाई थाहा छ संसारमा १० सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपत्यकाहरू? यी शानदार ठाँउहरू र ती लुक्ने ठाउँहरू सम्झनुहोस् जुन उनीहरूले भ्रमण गर्नेहरूका लागि लुकेका छन्।
बोराके कसरी पुग्ने? एयरवे, समुद्री मार्ग र ल्यान्डवे
Boracay यात्रा को सोच हुनुहुन्छ? हामी तपाईंलाई हावा, समुद्री वा भूमि विकल्पहरू बताउँदछौं जुन तपाईंले फिलिपिन्सको प्याराडाइसियल ठाउँमा पुग्नु पर्छ।
अल्पाइन जीव: स्विजरल्याण्डको पशुहरू
स्विट्जरल्याण्डको आल्प्सको विशिष्ट जनावरहरूबारे जान्नुहोस्, धेरै प्रजातिहरूको घर अत्यधिक विविध प्राणीहरू। के तपाई तिनीहरूलाई जान्न चाहानुहुन्छ?
जहाँ उत्तर सागरले बाल्टिकलाई भेट्छ
हामीले डेनमार्कमा स्केगेन पत्ता लगायौं, एउटा अविश्वसनीय ठाउँ जहाँ दुई समुद्रहरू भेटिन्छन् र हामीलाई असामान्य परिदृश्य देखाउँछन्। के तपाई यसलाई हेर्न चाहानुहुन्छ? प्रवेश!
Quilotoa, इक्वेडोर एन्डिस को एक मोती
क्विलोटा एक इक्वेडरिया ज्वालामुखी हो जसको क्रेटरले यसलाई क्रेटर लेक भनेर चिनिन्छ। विश्वको सब भन्दा दर्शनीय ज्वालामुखी ताल।
Andalusia मा3सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
अन्डालुसियामा धेरै समुद्री किनारहरू छन् जुन लोकप्रिय र उत्कृष्ट छन्, र हामी तपाईंलाई तीनवटा राम्रो देखाउँछौं, जुन तपाईंले दक्षिण यात्रा गर्नुभयो भने याद गर्नु हुँदैन।
टोक्यो - क्योोटो Nozomi सुपर एक्सप्रेस Shinkansen मा
हामी तपाईंलाई के भन्छौं टोकियो - क्योटो यात्रा भनेको जापानी बुलेट ट्रेन वा शिन्कानसेनमा चढेको जस्तो छ, यो नामले यसलाई त्यहाँ भनिन्छ।
चीनको बारेमा केहि रोचक तथ्य: इतिहास, संस्कृति, भूगोल र आकर्षणहरू
हामी चीनको बारेमा सबै कुरा पत्ता लगायौं: इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आकर्षण र कुनाहरू जुन तपाई एशियाई देशको यात्रामा मिस गर्न सक्नुहुन्न।
Erechtheion, एथेन्सको एक्रोपोलिस मा प्रसिद्ध मंदिर
एरेथियन पुरातन ग्रीक मन्दिरको नाम हो जुन एथेन्सको एक्रोपोलिसको उत्तरी भागमा खडा छ।
रोमान्टिक रोड, जर्मनी को दक्षिण को लागी एक आवश्यक यात्रा
रोमान्टिक रोड (रोमान्टिचे स्ट्रासे) जर्मनीको सबैभन्दा प्रसिद्ध र सब भन्दा पुरानो पर्यटन सर्किट हो।
दक्षिणी जर्मनीको सपना महल, न्युस्वान्स्टेन क्यासल
Neuschwanstein Castle एक प्रोमन्टरीमा अवस्थित छ Platllat घाटमा अवलोकन गर्दै।
Porquerolles, फ्रान्सेली Riviera को idyllic प्राकृतिक शरण
पोर्क्वेरोलिज हायरस द्वीपसमूहको टापुहरूको सबैभन्दा ठूलो र पश्चिमी हो।
ह्याम्प्टनमा पुग्न यातायातको साधन
हम्प्टनहरू शान्त म्यानहट्टनबाट बाहिर निस्कन शान्त ठाउँ हुन्। यस क्षेत्रमा पुग्न धेरै तरिकाहरू छन् जुन पहिले भन्दा धेरै फेसनल छ
यूरोपबाट न्यु योर्कको लागि डु by्गामा जानुहोस्
डु by्गामा न्यू योर्कको यात्राको सम्भावनाको बारेमा जानकारी। त्यहाँ रानी मेरी २ क्रूज जहाज र एक व्यापारी जहाजमा जाने विकल्पको कुरा छ।
बैk्कक ट्याक्सीहरूको रंगहरू
बैंककको ट्याक्सीहरू सबै र colors्गका हुन्छन्, इन्द्रेणी जुन शहरको सडकहरूमा विराम बिना बग्दछ
लिस्बन शहरको रोमान्टिक दृष्टिकोणहरू (I)
लिस्बनको सबै भन्दा रोमान्टिक कुनाहरू मध्ये, यसको प्रख्यात दृष्टिकोणहरूले एक विशेष ठाउँ ओगटेको छ।
ग्रीन Horseshoe: Zagreb मार्फत पार्क कोरिडोर
झाग्रेबको डाउनटाउन क्षेत्रको रूपरेखा उपत्यकाले यसको दुई मुख्य पहाडहरू द्वारा बनेको 'यू' को आकारमा कोर्यो।
कीवे सुपरलाइट २००: चिनियाँ हेलिकप्टर मोटरसाइकल यात्राको लागि मोटरसाइकल आदर्श
मोटरसाइकल यात्राहरू एड्रेनालाईन मनपराउनेहरूको लागि सब भन्दा शानदार रमाइलो हो।
ओशिनियाका प्रमुख एयरलाइन्स
आज हामी ओसिनियामा केहि महत्वपूर्ण एयरलाइन्सहरू भेट्ने छौं। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक एयरलाइन्ट क्न्टासको उल्लेख गरेर सुरु गरौं ...
ला मंगा डेल मार मेनोर
ला मंगा डेल मार मेनोर क्षेत्र
लीमा शहर केन्द्रीय राजमार्ग र पान अमेरिकी राजमार्ग मार्फत देशको बाँकी क्षेत्र संग जोडेको छ। पछि…
पर्नामाम्बुको, फर्नान्डो डे नोरोन्हा (द्वितीय) मा तटहरू
फर्नांडो डे नोरोन्हाको सुन्दर समुद्री तटहरूको साथ जारी राख्दै: Playa del Boldró यो पनि प्राय जसो प्रायः एक हो, योसँग ...
उत्तम ल्याk्कवी छुट्टी: त्यहाँ कसरी पुग्ने र कति खर्च गर्ने?
नाम ल्याkकावीको अर्थ "इच्छाको देश" हो, यो विचार जुन इतिहासको पछाडि जान्छ ...
क्राबीमा कसरी पुग्ने? हवा र भूमि मार्ग
यदि तपाईं क्रबीको यात्रामा रुचि राख्नुहुन्छ र यो कसरी गर्ने जान्नु हुन्न भने, हामी यहाँ तपाईंलाई विभिन्न तरिकाहरू प्रदान गर्दछौं, ताकि ...
गुइलिन कसरी पुग्ने? उडान, रेल र बसहरू
गुइलिन चीनको गुवाँची झुआang्ग स्वायत्त क्षेत्रको उत्तरपश्चिममा अवस्थित एउटा शहर हो। प्राप्त गर्न ...
भारत कसरी पुग्ने? उडान र एयरलाइन्स
पौराणिक भारत भ्रमण गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? आवास, भ्रमण र अन्यको बारेमा सोच्नु अघि हामीले ...
कम्बोडिया कसरी पुग्ने? एयरलाइन्स र अन्य विकल्पहरू
कम्बोडियामा पुग्न विभिन्न तरिकाहरू छन्। यदि तपाईं यसलाई हावामा गर्न छनौट गर्नुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई चेताउनी दिन्छौं कि कुनै एयरलाइन छैन ...
अज्ञात आइल अफ म्यान
आयरिश सागरमा अवस्थित, इ England्ल्यान्ड, स्कटल्याण्ड, वेल्स र आयरल्यान्डको बीचमा, यो बेलायती क्राउनको आश्रित क्षेत्र हो ...
इस्तानबुलको वरिपरि कसरी पुग्ने
इस्तानबुल विश्वमा सब भन्दा बढी जनसंख्या भएको शहरहरू मध्ये एक हो, र त्यसैले एक प्रभावशाली अराजकता। थप रूपमा, यो नुहाएको छ ...
तपाईंको यात्राको योजना बनाउँदै: १- एशियाको लागि उडान।
१.- स्वतन्त्र यात्रीका लागि, आगमन एयरपोर्टले केही फरक पार्दैन। यो स्पष्ट छ कि मितिहरू निर्णय गरेपछि ...